पुरानो दराज किनेर घरमा ल्याए पछि भित्र हेर्दा २ करोड रुपैयाँ निस्कियो.. – Sandes Post
May 6, 2022 569
एक व्यक्तिले सेकेन्ड ह्यान्ड दराज किनेर घर ल्याए। तर जब उनले त्यसलाई खोलेर हेरे, उनी भित्रको दृश्य देखेर छक्क परे । वास्तवमा दराज भित्रबाट २ करोड रुपैयाँ नगद निस्कियो । उनले यो दराज अनलाइन साइट इबेबाट किनेका हुन्।
उक्त व्यक्तिको नाम थोमस हेलर हो, जो जर्मनीको बिटरफिल्डका हुन् । ‘डेली मेल’ को रिपोर्टका अनुसार थोमसले किचनमा सामान राख्नको लागि सेकेन्ड ह्यान्ड किचन क्याबिनेट किनेका थिए । यसका लागि उनले ३१ हजार रुपैयाँ तिरेका थिए । तर क्याबिनेट खोल्नेबित्तिकै उनका आँखा खुलेका खुल्यै रहे ।
वास्तवमा यो क्याबिनेट भित्रबाट उनले दुईवटा बाकस फेला पारे जसलाई खोल्दा ती बाकस भित्रबाट १ लाख ५० हजार युरो (२ करोड रुपैयाँ) रुपैयाँ नगद निस्कियो । तर, पैसा आफ्नो खल्तीमा राख्नुको सट्टा थोमसले स्थानीय प्रहरीलाई पैसा हस्तान्तरण गरे ताकि पैसा मूल मालिकसम्म पुगोस्।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा यो पैसा हल्ले सहरमा बस्ने ९१ वर्षीया वृद्धाको भएको पत्ता लगायो । यो क्याबिनेटकी पहिलो मालिक पनी ती महिला नै थिइन् । उनका नातिले क्याबिनेट बेचेका थिए, तर वृद्धाले यसभित्र नगद राखेको कुरा उनला नातीलाई थाहा थिएन।
जर्मनीमा हराएको पैसा फेला पारेमा त्यो रकम १० युरो भन्दा बढी भएमा आफ्नो साथमा राख्नु अपराध हो। यदि यस्तो अपराधमा दोषी प्रमाणित भएमा तीन वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ। तर, इमान्दारीपूर्वक पैसा फिर्ता गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने कानुन छ । यस्तो अवस्थामा कुल रकमको ३ प्रतिशत थोमसलाई पुरस्कारस्वरुप दिइएको थियो । उनले ४५०० युरो (करिब ६ लाख रुपैयाँ) पुरस्कार पाए ।
Prevफेसवुकबाट लभ परेर बिबाह गर्ने बेहुलाले मोटरसाईकल मागेपछी….
Nextपल शाहको शुभचिन्तक फ्यानले किन सेवन गरिन बि*ष, कारण यस्तो ,पल छुट्दै (हेर्नुस् भिडियो )
रुसले एक लाख ३४ हजार सेना भर्ती गर्दै, नेपाली पनि जान पाउने..?
चर्चित स्टार महेश बाबुले मलाई बलिउड फिल्म खेल्नै कुनै आवश्यक छैन् भनेपछि तरंग मच्चियो
जेल भित्र पल साहको दैनिकी, ६० रुपैयाँ पैसा र ७०० ग्राम चामलको भात,हेर्नुहोस भिडियो
राप्रपाको चुनावी प्रतिबद्धता : कक्षा १२ सम्म निःशुल्क, सुत्केरीलाई तीन हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता